Shina: Profesora Koreana matintsikera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2007 16:15 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 日本語, Deutsch, Español, македонски, English
Navoakan‘ny siniben-tserasera maro teny Shina ity vaovao ity tamin'ny 31 aogositra lasa teo: Nametraka hevitra ny profesora Koreana antsoina hoe Zengh Zaishu avy ao amin'ny Onivesiten'i Ehwa fa, tsy araka ny fiheverana mahazatra hatramin'izay fa, avy any Korea ny ankamaroan'ny [angano] Shinoa. Ny petrakevitra napetrany dia nifototra tamin'ny fahamaroan'ny andriamanitra Shinoa hita ao amin'ny Anganon'ny tendrombohitra sy ny ranomasina izay ahitana ny tombatsarin'i Goguryeo.
Eo ambanin'ny lahatsoratra moa dia notanisaina ny mampifanohitra ny kolontsaina koreana amin'ny kolontsaina shinoa hatramin'ny taona 2005 no mankaty, ka tafiditra ao ny fetin'ny sambo dragona, ny niandohan'ny printy (iray amin'ny zavatra lehibe noforonina Shinoa) ary ny raokandro Shinoa.
Nanohitra izany petra-kevitra izany haingana dia haingana ny tontolom-bolongana Shinoa. Ao amin'ny 163.com ohatra dia mihoatra ny 3000 ny isan'ny setrin-kevitra mitsikera ny profesora Zheng Zaishu. Mihoatra ny atsasaky ny setriny no manakiana ny koreana ho firenena mitady fahabetsahan-karena anatin'ny fanadisoam-panantenana ny tenany amin'ny alalan'ny fangalarana ny kolontsain'ny mpiray sisintany amin'ny dia i Shina izany. Maro moa ireo mamerina ny petra-kevitry ny profesora ihany ary milaza fa ny tena marina dia avy amin'ny Shinoa no nohavian'ny Koreana. Ny tena niteraka adihevitra indrindra moa dia ny fanoharana momba ny fitsaboana miaraka amin'ny [na amin'ny alalan'ny] plastika, moa dia tena nanivaiva tanteraka an'i Korea mihitsy. Noho ny fahamaroan'ny kiana tsy misy fanajana dia mba namporisika ny Shinoa ny Koreana iray (hita eo amin'ny fametrahan-kevitra manko ny toerana nihavian'ny soratra) mba tsy hanararaotra toy ny banga mihomehy loatra saingy rendriky ny adihevitra mahatratra 100 pejy avy hatrany ilay fanamarihana. Tamin'ny fitsapan-kevitra tao amin'ny 163.com dia 1960 ny isan'ireo mihevitra fa “firenena bitika onenan'ny olona avy any amin'ny faritra (toy ny tany lavitr'andriana) i Korea” raha 1244 kosa ireo olona nihevitra fa “tsy mila miady amin'ny mponina hafa isika Shinoa fa ny famonjena sy ny fikolokoloana ny kolontsaintsika no imasoana”.
(niniana tsy napetaka mivantana ny hevitry ny mpamaky hisorohana ny adihevitra hafa indray)